Dhageyso Sheekh Abuu Muscab Oo Ka Hadlay Qaraxa Magaalada Gaalkacyo. – Bogga Calamada.com
Dhageyso Sheekh Abuu Muscab Oo Ka Hadlay Qaraxa Magaalada Gaalkacyo.
March 31, 2016 4:56 pm Views: 15
Afayeenka ciidanka mujaahidiinta Sh. Cabdi Casiis Abuu Muscab oo shir jaraa’id u qabtay warbaahinta ayaa faafaahin ka bixiyey howlgalkii halyeeynimo ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo, kaas oo lagu dilay mas’uul sare oo ka tirsanaa maamulka Ashahaada la dirirka ee Puntland.
Shaykh Abuu Muscab ayaa sheegay in howlgalka Gaalkacyo uu hadafiisu ahaa in lagu khaarijiyo Saciid Cali Yuusuf (Gaada-yare) kaas oo ahaa mas’uulka Maaliyada mudug u qaabilsan maamulka Ashahaada la dirirka ee Puntland.
Saciid Cali Yuusuf (Gaada-yare) wuxuu ahaa Ashahaada la dirir weyn oo in muddo ah ay baadi-goobayeen Mujaahidiinta, wuxuuna xiriir wanaagsan la lahaa dowladda Itoobiya.
Abuu Muscab ayaa sheegay in Sarkaalkan lala dilay ilaa 5 ruux oo ilaaladiisa ah.
Wuxuu sheegay in ninkaan uu ahaa nin ay mujaahidiintu doon-doonayeen wax badan, islamarkaana maanta uu Allaah soo gacan geliyey ugu dambeyntii.
Sidoo kale Afayeenka ciidanka mujaahidiinta Shaykh Cabdi Casiis Abuu Muscab ayaa ka warbixiyey dagaal culus oo maanta ka dhacay deegaanka Bilaal (Buufoow) ee duleedka Shalaanbood, halkaas oo lagu dilay ku dhawaad 10 askari oo ka tirsan Kufaarta Afrikaanta.
Afayeenka ayaa sheegay in dagaalka uu yimid ka dib markii ciidamada kufaarta Afrikaanta ay soo aadeen deegaanka Bilaal iyagoo doonaya in halkaas ay dhirta ka baabi’iyaan, si ay difaacyo uga dhigtaan kagana hortagaan weerarada Mujaahidiinta.
Wuxuu sheegay in ugu yaraan 7 askari laga dilay Kufaarta, gaadiid dagaalna laga gubay , ugu dambeyntii ay dib ugu noqdeen deegaanka Shalaanbood iyagoo hoogay.